एप्पलको नयाँ इभेन्ट अक्टोबर २०२१ मा, के के नयाँ आउन सक्छ? जान्नुहोस् पूरा विवरण - Thulo khabar
एप्पलको नयाँ इभेन्ट अक्टोबर २०२१ मा, के के नयाँ आउन सक्छ? जान्नुहोस् पूरा विवरण
एप्पलले आफ्नो आईफोन १३ सिरिज गत महिना अर्थात सेप्टेम्बरमा लन्च गरेको थियो। योसंगै, कम्पनी आईप्याड मिनी र एप्पल वाच सार्वजनिक गरेको थियो।
अब एप्पलले चाँडै अर्को कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ, जसमा धेरै उत्पादनहरु लन्च गर्न सक्नेछ। कम्पनीले आफ्नो आगामी कार्यक्रमको प्रक्षेपण मिति घोषणा गरेको छैन, तर योसंग सम्बन्धित धेरै रिपोर्टहरु बाहिर आउँदैछन्। यस इभेन्टमा, कम्पनीले एम वान एक्स प्रोसेसरका साथ म्याकबुक प्रो सहितको नयाँ म्याक लाइनअप प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। यो संगै, एयरपड्स थ्री र म्याक मिनी पनि लन्च हुन सक्नेछ।
गत वर्ष, एप्पल एमवान प्रोसेसरसंग नयाँ म्याक मिनी शुरू गरेको थियो, जो आफ्नो अघिल्लो जेनेरेशन मोडेल जस्तै देखिन्छ। यदि रिपोर्टहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने यो समय ब्रान्डले उच्च स्तरको म्याक मिनिको सुरुवात गर्न सक्छ, जो शक्तिशाली हुनेछ। यसमा, कम्पनीले इंटेलको प्रोसेसरलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछ।
यस बाहेक, कम्पनीले एयरपड्स ल्याउन सक्नेछ। एप्पलले सन् २०१६ मा, कम्पनीले पहिलो पटक एयरपड्सको सुरुवात गर्यो, जसको सफलता पछि एयरपड्स २ साना परिवर्तनहरुका साथ ल्याएको थियो। यसमा कम्पनीले वायरलेस चार्जिङ्गको सुविधा थपेको थियो। रिपोर्टहरुका अनुसार, कम्पनी एयरपड्स थ्री इभेन्टमार्फत घोषणा गर्न सक्छ जुन एयरपड्स प्रो जस्ता सुविधाहरुका साथ आउनेछ।
म्याक ओएस, मोन्टेरी डब्लूडब्लूडिसीमा एप्पलद्वारा घोषणा गरिएको थियो। नयाँ म्याक ओएसको नाम मोन्टेरी राखिएको छ। नयाँ ओएसमा, तपाइँले सुधारिएको सफारी ब्राउजर, सेकेण्ड स्क्रिनसहित धेरै सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एप्पलले मोन्टेरी म्याक ओएस यस बर्ष आउने बताएको थियो, तर कम्पनीले यसको मिति दिएको छैन। कम्पनीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न सक्ने आशा गरिएको छ। एजेन्सीहरु
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७८, मंगलवार